“မသိဘူးစားမယ်”ဆိုင်မှာ မသိသေးတဲ့ဟင်းပွဲအသစ်တွေကို သွားစားကြည့်ရအောင် – FoodiesNavi
“မသိဘူးစားမယ်”ဆိုင်မှာ မသိသေးတဲ့ဟင်းပွဲအသစ်တွေကို သွားစားကြည့်ရအောင်
By yin sandi On August 1, 2018 0
မသိဘူးစားမယ်ဆိုတဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် ဆိုင်နာမည်လေးနဲ့တင် ပစ်ကြွေသွားနိုင်မယ့် စားသောက်ဆိုင်လေးအကြောင်းဖောက်သည်ချပေးချင်ပါတယ်။ ဆိုင်နာမည်လေးကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေပေါများလွန်းတဲ့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ ” မသိဘူးစားမယ်”ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ နာမည်လေးကြားရုံနဲ့ ဂေါ်သွားပြီလားအစားတစ်လိုင်းတို့ရေ အရသာလေးကလည်းရှယ်ဂေါ်တယ်နော်။
menu နာမည်လေးတွေကြားရင်လည်း ထပ်ဂေါ်ဦးမှာ ? ဟင်းပွဲနာမည်တွေက မအေးသောင်း ၊ တာယာပွကြီး ၊ ဗိုလ်အောင်ဒင် ၊ မမြဝင်းတဲ့ ? နာမည်ဆန်းတွေနဲ့လိုက်အောင် ဟင်းပွဲအပြင်အဆင်တွေကလည်း ဆန်းပြားချက်ပဲ။ ဟင်းပွဲတွေကလည်း အမျိုးအစားတော်တော်လေးစုံတယ်။ ထမင်းကြော်ဆိုရင်တောင် ယိုးဒယားငပိထမင်းကြော် ၊ အမေရိကန်ထမင်းကြော် ၊ စပိန်ထမင်းကြော် ၊ စီချွမ်ထမင်းကြော် ၊ ကိုးကန့်ထမင်းကြော် ၊ မလေးရှားထမင်းကြော် ၊ စင်္ကာပူထမင်းကြော်ဆိုပြီး ကြိုက်ရာခုံခေါက်ပြီး ? ရွေးလို့ရသေးတယ်နော်။ မသိဘူးစားမယ်ရဲ့ ပင်လယ်စာပဲလေးကိုတော့ အသေကြွေ ။ လတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာတွေကို အရသာစိမ့်ဝင်နေအောင် ပြင်ဆင်ပေးထားတော့ မှန်းထားတာထက်ကို ပိုကောင်းနေရောပဲ။ အခုတလော ထရန်းဖြစ်နေတဲ့ မာလာရှမ်းကောစားမယ်ဆိုလည်း ပွဲသေး(၃၀၀၀)ကျပ် ၊ ပွဲကြီး(၃၅၀၀)ကျပ်နဲ့စားလို့ရတယ်။
ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်း ၂၀၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ လောက်ထိအစားစားရှိတယ်။ ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ ပြန်ရတဲ့အစားအသောက်တွေက ရှယ်တန်တယ်ပြောရမယ်။ ဆိုင်လေးက(၂)ထပ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ ရွေးချယ်ထိုင်လို့ရတာပေါ့ ။ ဆိုင်လိပ်စာလေးကတော့ အမှတ်(၃၂၁/A ) ၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမကြီး ၊ တကောင်းမှတ်တိုင်နဲ့ နန္ဒဝန်ဈေးမှတ်တိုင်ကြား ၊ (၄)ရပ်ကွက် ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ – မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၁)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/မသိဘူးစားမယ်
In Restaurant Guides Tagged fried rice, mala shan kaw, seafood Leaveacomment
ပုဇွန်ပေါများချိန်မှာ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်လေး လုပ်စားကြရအောင်
မရတော့ဘူး ဝက်သားဒုတ်ထိုးကို ဗိုက်ပေါက်ထွက်အောင် အဝစားပစ်မယ် ? ?